ग्यास्ट्रिक मात्र नभई महिनावारी गडबडीका लागि अचुक औषधि हो जाइफल, यस्ता छन् अन्य फाइदा – Krazy NepaL
March 8, 2021 1129
काठमाडौं – हामीले खाएको खाना पचाउनका लागि पेटमा एसिड बन्न थाल्छ । यदि अस्वस्थकर खाना खाएमा पेटमा आवश्यकभन्दा बढी एसिड बन्न जान्छ । कुनै समय बढी खाने, भोकै रहने, फास्टफुड र मसालेदार खानाले पनि एसिडिटी बढाउने गर्छ ।
यदि तपाईलाई निद्रा लाग्दैन भने जाइफल दुधसँग मिसाएर खाँदा निद्रा लाग्छ । तपाईको हातगोडा र जीउ दुखेको छ भने जाइफललाई पानीमा पकाएर मह मिसाई खाएमा ठिक हुन्छ ।
एसिडिटीको समस्याबाट बच्न तुलसीको पाउडर, अजाइनोको सुप र दालचिनीलाई एक कप बटर मिल्कमा मिसाएर खान सकिन्छ । यस्तो मिश्रण बिहान र बेलुकी एक–एक कप प्रयोग गर्दा हुन्छ । यसले कब्जियत, ग्यास्ट्रिक र अपचको समस्याबाट पनि बचाउने काम गर्छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अदुवाको रसमा मह मिलाएर पिउँदा पनि एसिडिटीको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । तपाईंमा एसिडिटी छ भने एलोभेराको जुस औषधि बन्न सक्छ । पुदिनाको पातलाई उमालेर पिउँदा एसिडिटीको समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । मनतातो पानीमा कागतीको रस मिलाएर प्रयोग गर्दा पनि यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
एसिडिटीबाट बच्न एक गिलास पानीमा एक चम्चा मिठा सोडा मिलाएर बिस्तारै पिउन सक्नुहुन्छ । पानीमा कागतीको रस र मह मिलाएर पिउँदा पनि यस्तो समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
एक गिलास मनतातो पानीमा थोरै कालो खुर्सानीको धुलो र कागतीको रस मिसाएर पिएमा पनि एसिडिटीबाट बच्न सकिन्छ । एसिडिटीबाट बच्न जाइफलको धुलोलाई पानीमा मिलाएर पिउन पनि सक्नुहुन्छ ।
Prevकन्चनको मृ’त्यु पछि अनिशाको सि’उदो प’खाल्न पुगे गाउँले, अनिशाको बाबालाई घि’सारेर ल्याए स’डकमा (हेर्नुस् भिडियो)
Nextसाडी लगाउदा बिर्सेर पनि नगर्नुहोस् यी पाँच गल्ती, अति सुन्दर देखिनुहुनेछ
खुसिको खबर :आज सुनको मूल्यमा भरि गिरवात तोलामा ३ हजार ४ सयले घट्यो किन्नेको भिड
यीनै हुन् तामाका मुनाजस्ता देखिने अबोध बालवालिकासहित मारिएका ६ जना कार्की परिवार
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45592)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24219)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (17142)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (15145)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (14072)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (13159)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (13090)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (13008)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12604)